Maqaalkani, waxaan ku sharxeynaa sida loo qoro email si dib loogu dhigo dib-u-dhac, haddii ay tahay dib-u-dhac subax ama dib-u-dhac ku yimid wakhtiga kama dambaysta ah ee shaqadaada.
Maxaa sabab looga dhigaa dib u dhaca?
Waxaa jira dhowr jeer oo aad u baahan tahay inaad sabab u dhigto daahitaan. Tani waxay noqon kartaa sababtoo ah waxaad ku daashay shaqada sababtoo ah dhacdo lama filaan ah, ama sababtoo ah waxaad ku daahday shaqada. Si kastaba ha ahaatee, waxaa muhiim ah in la caddeeyo dib u dhigista sababo macquul ah iyo inaad ka raali geliso kormeerahaaga.
Naso, dib u dhacu sabab uma noqon karo xil ka qaadis haddii ay go'doon tahay ama marmar tahay! Si kastaba ha noqotee, weli waa muhiim in la caddeeyo si loo muujiyo iimaankaaga wanaagsan.
Talooyin qaarkood si ay u caddeeyaan dib u dhigista emailka
Markaad caddaynaysid dib u dhac emailwaa inaad taageertaa xaq-siintaada si ay u noqoto mid la aqbali karo, sababtoo ah suurtagal maaha inaad ku qanciso sheekooyinka wajiga.
Marka ugu horeysa, waxaa muhiim ah in aad bilawdo adoo raali gelinaya dib u dhigistaada. Haddii dib u dhacgu kugu xiran yahay, kormeerahaagu waa inuu fahamsan yahay. Haddii dib-u-dhiggaagu yahay adiga, uma baahnid in aad autoflagellate naftaada, laakiin fadlan raali naftaada oo sheeg in aad hubinayso inaysan mar kale dhicin.
Dabadeed, intii suurtogal ah, ku taageer caddayntaada caddayn jireed. Haddii aad ka daahdo ballan caafimaad (tusaale, baadhis dhiig), waa inaad tusin kartaa caddayn caafimaad. Sidoo kale haddii aad soo daahday shaqo sababtoo ah ma aadan jawaab ka helin la-taliyahaga mar hore: ku lifaaq shaqadaada email koobiga jawaabta daahday.
Halkan waa tusaale ah in la raaco si loo ogaado dib u dhigista emailka, haddii aan qaadano tusaale ahaan ballan caafimaad oo soconayey muddo ka badan intii la filayay.
Mawduuca: Daahitaanka ballanta caafimaad awgeed
Waxaan raaligelinayaa subaxnimadan.
Waxaan ballan ka sameyey baaritaan caafimaad oo caadi ah oo ku saabsan 8h, oo qaatay muddo ka badan intii la filayay. Ku lifaaqan waa shahaadada baaritaanka.
Waxaan rajeynayaa inaadan wax dhib ah ka qabin maqnaanshaheyga, waxaanan kuugu mahad celinayaa fahamkaaga
[Saxeex elektaroonig ah]
Halkan waxaa ah toban nooc oo dheeri ah si aad ula qabsato xaaladdaada
Email 1: Daahitaan cunug jiran awgiis
Waad salaaman tahay (magaca kormeeraha),
Waxaan halkan ka raaligalinayaa dib udhaca ku yimid… ..
Nasiib darro, dib u dhacan waxaa sabab u ah xaalad aan caadi aheyn oo ka baxsan xakameynteyda, tan iyo markii socod baradkeygu si xun u jiran yahay. Waxaa igu qasbay inaan dhakhtar u geeyo. Waxaan isku dayay inaan sameeyo intii karaankeyga ah si aan wax u qabto oo waxaan imid… saacado soo daahay.
Aniga oo og dhibaatada ay dib-u-dhacan sababtay, waxaan jeclaan lahaa inaan kuu soo bandhigo raalli-gelinteyda dhabta ah. Kama waaban doono inaan si dhakhso leh ula qabsado dib u dhaca ku yimid feylasha hadda jira haddii loo baahdo si looga fogaado wax dhib ah.
Fadlan aqbal, Marwo / Mudane, muujinta salaanteyda ugu fiican.
Email 2: Daahitaanka tareenka
Waxaan ku qaadanayaa xorriyadda qoraalka si aan kaaga raalli galiyo dib-u-dhiggayga 'saacadaha …….
Runtii, maalintaas, tareenkeyga waa la joojiyay markii aan imid saldhigga, aniga oo aan horay loo sii shaacin maalin ka hor ama ka hor intaanan ka bixin gurigeyga. Dib u dhaca tareenka ayaa waxaa sababay boorsooyin ku jiray wadada tareenka, taasoo ka celisay tareenada inay shaqeeyaan running saacadood.
Waxaan si qoto dheer uga cudurdaaranayaa dib-u-dhiggan ka baxsan awooddayda. Waxaan sameyn doonaa waxa lagama maarmaanka u ah inaan soo kabto saacadaha lumay si aan u dhameystiro feylasha hadda jira ugana fogaado inaan ciqaabo kooxda oo dhan mashruucan.
Waxaan ku suganahay howshaada oo dhan, fadlan aqbal muujinta tixgelinteyda ugu sareysa.
Email 3: Daahitaan ciriiriga gawaarida awgeed
Waxaan rabaa inaan kaa raali galiyo inaad la daahday kulanka…. taasoo ahayd inay dhacdo… .. saacadood.
Maalintaas, runtii waxaan ku xannibmay taraafikada… saacadood shil baabuur oo daran awgi. Dhowr wadiiqadood ayaa la xiray si loogu oggolaado in howlaha gurmadka ay u gudbaan, taas oo keentay hoos u dhac weyn oo dhanka isku socodka.
Waxaan si dhab ah uga xumahay dib u dhaca lama filaanka ah, waxaan sii yara sii joogayaa xafiiska si aan u soo celiyo waqtiga iga lumay oo aan u fiirsado maadooyinka looga hadlay intii uu socday kulanka.
Hore ayaan kaaga mahadcelinayaa fahamkaaga, waxaanan kaa codsanayaa inaad aaminto muujinta salaanteyda ugu fiican.
Email 4: Daahi baraf dartiis
Waxaan dib kuugu soo noqon doonaa adiga oo ku saabsan dib u dhigisteyda saacadaha …….
The… /… /… ah. , ayaa habeen baraf watay. Markii aan soo toosay, dhammaan waddooyinka taraafikada waxay noqdeen kuwa aan la mari karin xaddiga barafka iyo cusbada dariiqyada darteed.
Waxaan isku dayay inaan ku imaado xafiiska anigoo raacaya gawaarida dadweynaha, laakiin wax tareen ah oo soconaya midkoodna majiro maxaa yeelay dhamaan wadooyinka tareenka waxaa qariyay baraf. Waa inaan sugaa ilaa… saacadood kahor intaanan tareen helin.
Waxaan si kal iyo laab ah uga cudurdaaranayaa dhacdadan lama filaanka ah, waxaan sameyn doonaa wixii lagama maarmaan u ah hormarinta daahitaanka shaqadayda dhacdadan awgeed.
Waxaan rajeynayaa in dhacdadani aysan ciqaab badan kugu soo kordhin, fadlan aqbal muujinta salaanteyda ugu fiican.
Email 5: Daahitaan shil baaskiil awgood
Waxaan jeclaan lahaa inaan u adeegsado fariintan inaan ku sharaxo dib u dhaca igu yimid saaka.
Xaqiiqdii, waxaan baaskiil ugu socdaa inaan shaqeeyo maalin kasta. Maanta, anigoo maraya wadadeyda caadiga ah, gaari ayaa i gooyay oo si qatar ah ii tuuray. Waxaan qabay anqawga oo qalooca waana inaan aado qolka gargaarka degdega ah si aan xoogaa daaweyn ah ugu qaato. Tani waxay sharraxaysaa sababta ay ahayd inaan maqnaado qayb ka mid ah subaxnimadii, laakiin waxaan toos ugu imid inaan ka shaqeeyo cusbitaalka.
Sidoo kale, waxaan ku siinayaa raali gelin dhab ah dib-u-dhacan ka baxsan koontaroolkayga iyo dhibta keentay. Waxaan horay u socon doonaa dib u dhaca si aan uga fogaado inaan u naco kooxda oo dhan.
Email 6: Daahitaan 45 daqiiqo qandho darteed
Waxaan rabaa inaan si qoto dheer uga raali galiyo dib udhacdayda ..... 45 daqiiqo.
Runtii qandho ayaa i qabatay habeenkii… .. dawo ayaan qaatay laakiin subixii markii aan soo toosay, waxaa i yeeshay madax xanuun weyn walina waxaan dareemay xoogaa xun. Waxaan sugay xoogaa daqiiqado ah oo ka dheer sidii caadiga ahayd in xanuunku dhaafo kahor intaanan shaqada u imaanin xaalado wanaagsan.
Tani waxay sharraxaysaa dib udhacdayda 45 daqiiqo oo aan jeclaan lahaa inaan si daacad ah uga raali galiyo. Waxaan rajeynayaa inaanan wax dhibaato kuu geysan. Waxaan u oggolaan doonaa naftayda inaan sii joogo wax yar ka dib fiidkan si aan dib ugu dhigo dib-u-dhacan.
Waad ku mahadsantahay fahamkaaga aniguna gacantaada ayaan ku jiraa.
Email 7: Dib u dhac shilka gaariga dartiis
Burburka baabuurkeyga dartiis, waxaan u qaadanayaa xorriyadda qoraalka si aan kuugu digo inaan ku soo daaho by. daqiiqado / saacado saaka.
Runtii, waa inaan si deg deg ah ugu dejiyaa garaashka kahor imaatinka gaadiidka dadweynaha. Waxaan rajeynayaa inaan imaado xafiiska saacadaha ... ugu badnaan.
Waxaan si kal iyo laab ah uga cudurdaaranayaa dhibkaas oo waxaan sameyn doonaa wixii lagama maarmaan u ah dib u dhaca. Macluumaadkaaga, waxaan damacsan yahay inaan kuu soo diro faylka la soo celin doono maanta saacadda ugu dambaysa.
Waad ku mahadsantahay fahamkaaga waxaanan diyaar ku ahay taleefan iyo emayl ilaa aan imaado xafiiska.
Email 8: Daahid sababo la xiriira kulanka dugsiga
Waxaan jeclaan lahaa fariintan gaaban in aan ka raali galiyo dib u dhacdeyda of. saacado saaka.
Nasiib darrose, waxaan ballan deg-deg ah ku yeeshay dugsiga ilmahayga subaxnimadii hore. Kaas oo waxyar ka qaatay sidii la filayay. Kulankaan oo dhici lahaa 7:30 am ilaa 8:15 am ayaa ugu danbeyntii lagu soo gabagabeeyay…. waqtiga. Waxaan sameeyay intii karaankeyga ah inaan xafiiska imaado sida ugu dhaqsaha badan.
Waxaan ka raaligelinayaa dhacdadan. Waxaan qaadi doonaa talaabooyinkeyga si aan dib ugu dhigo dib u dhaca ku yimid feylasha maalinta, anigoo rajeynaya inaanan ciqaabin kooxda.
Email 9: Dib u dhig sababo la xiriiro wicitaan
Waxaan rabaa inaan ka raali galiyo dib u dhackeyga… daqiiqo / saacadood.
Runtii, subaxdaas, maan maqal saacadda digniintayda oo dhawaaqaysa waxaanan seegay tareenka aan inta badan raaco si aan shaqada u aado. Tareenka ku xigaa wuxuu ahaa nus saac kadib, taas oo sharraxaysa dib u dhaca dheer. Waxaan si kal iyo laab ah uga cudurdaaranayaa dhacdadan oo markii ugu horeysay dhacday dhowr sano.
Waxaan damacsan yahay inaan hubiyo in xaaladdan oo kale aysan dib dambe u dhicin mustaqbalka, iyo inaan la qabsado anigoo waxyar gadaal maanta joogaya xafiiska.
Anigoo rajaynaya inaanan wax badan kugu dhibin dhacdadan, fadlan aqbal muujinta tixgelintayda ugu sarraysa.
Email 10: Dib u dhig shaqo joojin darteed
Waxaan qorayaa inaan raali gelin ka bixiyo dib udhaca I ah… ..
Xaqiiqdii, shaqo-joojin qaran ayaa la abaabulay maalintaas inta lagu gudajiray taas oo gaadiidka dadweynaha iyo gaadiidleyda aysan ku wareegi karin xaaladaha caadiga ah. Markaa macquul iima aheyn inaan shaqada ku yimaado waqtigii loogu tala galay maxaa yeelay ma isticmaali karin gaarigeyga mana qaadan karin gaadiidka dadweynaha.
Sidoo kale, waa inaan sugaa inta ay xaaladdu ku soo noqoneyso wax ka yar ama ka yar sidii caadiga ahayd si aan u raaco tareenka xiga ee to.
Waxaan ka cudurdaaranayaa dhacdadan oo ka baxsan awooddayda. Waxaan horey kuugu soo diray tabarucaada mashruuca…. taas oo ahayd maanta.
Adiga oo hadhay wixii aad ka wada hadli lahayd,
Email template si ay u caddeeyaan daahitaan July 26th, 2021Tranquillus
horeEmail template si ay u cadeeyaan maqnaansho
socdaEmail template ah oo ku dhawaaqaya ka qaybqaadashadaada kulan kulan